I-UpSnap: Ukukhangisa okungabizi okungamaselula, okwendawo, kanye nokwendawo | Martech Zone
I-UpSnap inikeza inethiwekhi yokukhangisa yeselula enikela ngokuvela okungaphezu kwezigidi eziyinkulungwane ngenyanga. Futhi ngokubambisana kwabo namanye amasayithi amakhulu, bayakwazi ukubonisa izikhangiso kumanethiwekhi avela eceleni ngezinga elingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyi-100 okuvelayo njalo ngenyanga. I-UpSnap ikuvumela ukuthi ukhombe amakhasimende aseduze kwebhizinisi lakho. Lapho umkhankaso wakho usuqala ukusebenza, i-UpSnap izobonisa isikhangiso sakho seselula kumakhasimende angaphakathi kwebanga elingamamayela amahlanu. Ukuqondiswa kunwebeka ngaphandle kususelwa ekutholakaleni kwethrafikhi nakwiradiyo oyifunayo.
I-UpSnap inikeza konke kusuka ekwakhiweni kwesikhangiso kuya ekubikeni:
Ngemuva kokubhalisa, thola ucingo oluvela ku-UpSnap Mobile Expert ukuqedela imininingwane yomkhankaso wakho wesikhangiso seselula.
I-UpSnap izoklama futhi ifake ikhodi ekhasini lokufika nesikhangiso se-banner sebhizinisi lakho. Odinga ukukwenza ukubuyekeza nokuvumela ubuciko.
Isikhangiso sakho sizoboniswa kuze kube yizikhathi ezingama-20,000 ngenyanga kumasayithi amakhulu nezinhlelo zokusebenza ngo- $ 100 / mo kuphela.
Qala ukwamukela izingcingo, ekuvakasheni kwesitolo nokuningi. Futhi, ungabuyekeza ukusebenza komkhankaso wakho ngenyanga analytics umbiko.
I-UpSnap inikeza ukukhangisa kwesikhangiso okunamandla ngokususelwa endaweni, umshicileli, uhlelo lokusebenza lweselula, nephrofayili yomthengi.
ISNAPalytics inikeza idatha enkulu analytics ngisho nabakhangisi abancane kunabo bonke. Qonda ukusebenza komsebenzisi futhi uzibandakanye nesilinganiso somkhankaso wesikhathi sangempela ukukhomba abathengi lapho sebelungele ukuzibandakanya.
Tags: ukuqondiswa kwendawoukukhangisa kwendawoukukhangisa okususelwa endaweniinethiwekhi yesikhangiso yeselulaizikhangiso zeselula ezindawoizikhangiso zendawo zeselulaukukhomba kweselulaphezulu
I-Oct 11, i-2016 ku-12: i-19 PM
Inkampani yethu itshala iphakethe lesilingo nge-Upsnap. Gcwalisa udoti wemali nesikhathi. Ayikho impendulo, ayikho imikhondo, ayikho imibiko.
Musa ukuchitha isikhathi sakho.